भारतीय ट्रक जल्यो
गजलकार तथा कथाकार मनु ब्राजाकी संगको कुराकानी
जीवन र् प्रश्न
मृत घोषित ब्यक्ति आर्यघाटमा ब्यूँतिए
गाउँखाने कथा ५० (Nepali #Gaukhane #Katha)
बन्दुक विचार हैन विनाश हो मुर्खता हो
शुभकामना र बधाइ छ , बाबुरामजी !
सन्दर्भ : श्रीकृष्णजन्माष्टमी ( भदौ ४ , २१ अगस्त )
समय - प्रधान मन्त्री र राजिनामा
गजल : मुख भरिएको छ
New Bob Marley Video for Awareness by Save the Chi...
बाह्रआना घडेरी, शिरिषको बोट र आमाको सपना
कवि, कम्युनिस्ट र कन्या !
म फेरी आउनेछु
माया तिमीले छोडेपछि
गाउँखाने कथा ४८ (Nepali #Gaukhane #Katha)
केहि वर्ष पहिले एउटा भारतीय ट्रक यसरी नै थानकोट मा जलेको थियो. किन होला ?
यो भारतीय ट्रक नेपालमा चलाउन नपाइने भनेर माओवादीले जलाएका हुन। माओवादी जनयुद्धको बेला भारत विरुद्ध निकै खनिने माओवादी सरकारले भारतसंग विपा सम्झौता गरे पछि थानकोटमा माओवादीले जलाएको ट्रकको याद आयो र उक्त फोटो टाँसेको हुं। विपामा युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व र संकटकालका कारण हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति ब्यबस्था गरिएको छ। आफै झाँक्री आफैं बोक्सी जस्तो पो भयो यो त?
गजलकार तथा कथाकार मनु ब्राजाकी संगको कुराकानी यस link मा हेर्नु होला
प्रश्नहरू को ताँती लागेको छ ,
एक पछि अर्को अर्को पछि अझै अर्को ,
निस्तब्ध सुन्यतामा बाँचेको छु ,
प्रश्नै प्रश्नहरू को बीचमा रूमल्लियर्,
सबै भन्दा पहिलो प्रश्न कुन थियो ?
कुन प्रश्न मनमा पहिले ऊब्जेथ्यो ?
भुली सकेछु ,
कुन प्रश्न प्राथमिकतामा परेको थियो ?
कल्पना को पाण्डोरा भित्र
आफ्नै कैदी भएको छु ,
थुप्रै बेइमानी प्रश्नहरू पनि थिए
जसको उत्तर खोज्नै सकिन ,
मेरो प्रश्नको जवाफ तिमीबाट आएन
अलमल मा छु अचेल ,
तिम्रो प्रश्नको जवाफ दिन म वाध्य छु कि छैन ?
अनुत्तरित प्रश्नहरू यथास्थान मैछन अझै ...
तिमी र् मेरा बीच !!!!!!!!
अहिले जीवन हतार मा गुज्री रहेको छ
फुर्सद मा समयको पाना पल्टाएर् हेरौँला
शायद कुनै उत्तर थियो कि ?
एउटै मन कहिले आगो कहिले पानी हुन्छ ।
भइदिन्छ कहिले राजा कहिले रानी हुन्छ ।
खुसी हुदाँ उफ्रिएर मनको हिमाल चढे पनि,
यही मन कहिले बद्मास् कहिले ज्ञानी हुन्छ ।
संसारको रीतसँग मिल्नु पर्ने बाध्यता छ
त्यसैले पो कहिलो चोर कहिले ध्यानी हुन्छ ।
काठमाडौं, मंसिर १४ । अस्पतालले मृत घोषित गरेको मानिस पशुपति आर्यघाटमा पुर्याएपछि व्यूँतिए। काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचाररत रामहरि श्रेष्ठलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरी शववाहनमा आर्यघाट पुर्याइएका विरामी श्रेष्ठले श्वासप्रश्वास लिन थाले। विरामीका आफन्तहरूले अस्पतालले उपचार सम्बन्धी कुनै पनि कागजपत्र नदिइ मृत घोषणा गरी शववाहानमै राखेर पठाएको बताए। विरामीका भाईले अस्पतालमा अरु आफन्तहरूलाई जान नदिएर आफूलाइ मात्र भित्र बोलाएर कागजमा हस्तारक्षर गराई डाक्टरले मृत्यु भएको जानकारी दिएको बताए।
कात्तिक २३ राती ११ वजेको समयमा चाबहिल चोकमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी शख्त घाइते अवस्थामा भेटेपछि श्रेष्ठलाई प्रहरीले उपचारार्थ महाराजगंज शिक्षण अस्पताल पुर्याशई आफन्तलाई खवर गरेको आफन्तले बताएका छन्। दुर्घटनामा परी टाउकोमा गहिरो चोट लागेको र दिमागमा रगत जमेकोले त्रिवि अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि लाइफ केयर अस्पतालमा रिफर गरिएको र त्यहाँ पनि उपचारह हुन नसक्ने भएपछि न्युरो अस्पताल पुर्याएइएको बताइएको छ। दोरम्भा–९ रामेछापका २७ वर्षीय श्रेष्ठले कपनमा कुखुराको मासु व्यवसाय गर्दै आएका थिए। उपचारका लागि आठ लाख खर्च भइसकेको र अस्पतालले थप एक लाख माग गरेको उनका आफन्तले बताए।
अस्पतालले मंसिर २ गते शुक्रवार विहान १० वजे नै मृत घोषणा गरेपनि उपचारमा लागेको रकम दिन नसकेपछि साँझ ४ बजे मात्र रकम वुझाएर विरामीलाई शववाहनमा राखेर आर्यघाट पठाएको विरामीका आफन्तले बताए। श्रेष्ठ आर्यघाटमा पुगेर व्यूँतिएपछि उनको पशुपति धर्मशालामै अक्सिजन दिएर उपचार भैरहेको भए पनि हालको उनको अवस्था बारेमा थाहा पाउन सकिएन। रामहरि श्रेष्ठका बारेमा न्युरो अस्पताल प्रशासनले भने श्रेष्ठलाई अस्पतालले मृत घोषित गरेको नभई उनका आफन्तहरूको आग्रहमा अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको दाबी गरेको छ। अस्पतालले डेथ अन रिक्वेष्ट डीओआरको आधारमा श्रेष्ठलाई डिस्चार्ज गरेको जनाएको छ। रामहरि श्रेष्ठका श्रीमती, ५ वर्षीय छोरी र ७ महिनाका छोरा रहेका छन्।
Posted by: Anjan Banbasi Labels: दौँतरी खबर
अपडेट: गाउँखाने कथा ५० को सही उत्तर हो: अण्डा
उत्तरको प्रयास गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। उत्तर मिलाउने लुनाजीलाइ विशेष धन्यवाद।
माउले हाडपायो हाडले नानी हाड भित्र हेर्दा दुईथरी पानी , के हो?
- स्वेता बानिया
आँखा भित्रका गहिरा भावनाहरु
के देख्न सक्छौ ..
मुटुमा लागेका चोटहरु ..
के मेटाउन सक्छौ ..
मुटुका असंख्य डोबहरू
के नियाल्न सक्छौ ..
आँखाका पवित्र पानीका थोपाहरु
के सुकाउन सक्छौ..
बचनले दिएका गहिरा चोटहरु ..
के भुलाउन सक्छौ..
उज्यालो नै देख्न नपाई रात हुन लाग्यो रे
भर थियो तिम्रो कुठारघात हुन लाग्यो रे
कलीयुगको राम राज्य यस्तै हुँदो रैछ कि
सुन्छु चोरलाइ चौतारीको बात हुन लाग्यो रे
घाइते भै ढलेको छ बिचारो निरह शान्ति
उठोस् कसरी बारुद सौगात हुन लाग्यो रे
सबको आश अब बिस्तारै लाश हुँदै छ यहाँ
खुशी मर्‍यो मलामिको शुरुवात हुन लाग्यो रे
बिबेकमा बिर्को लाग्यो कि बुद्धी धेरै भो तिम्रो
जाली फटाहाको टोली पो साथ हुन लाग्यो रे
नियतीले झारी सक्यो झटारोले झार्नु पर्दैन
निरंकुस्ता मौलाएको छ सकुनीले हार्नु पर्दैन
आफै परिरहेको छु अदृस्य बन्धनहरुमा यहाँ
त्यस माथी निर्दयी काँडे तारले बार्नु पर्दैन
मुटा सपना देखाइ लुट्नु जति लुटी सक्यौ
अन्योलमा जिउदै मरी सकेँ फेरी मार्नु पर्दैन
छत बिछत भएको छ मेरो अन्तर आत्मा फेरी
चिनी सकेँ तिम्रो क्षमता अब मुारो टानु पर्दैन
वाक्क दिक्क भएर बिस्तापित भै सके गाउबाट
आफै बिस्थापित भएँ कसैले बसाइ सार्नु पर्दैन
शुभ होस दशै भन्दै कति रटनु पट्टु सरि
भोक र रोगले सुकेको छ पेट यो टट्टु सरि
खेरा गयो पोहोर पनि शुभकामना दशैको
शान्ति कता पुग्यो बोली भो मेरो छट्टु सरि
सुख सम्ऋद्धी तेस्तै भो ऋणको बोझ थपियो
लाचार भै चुपचाप भाछु म फेरि लठ्ठु सरि
सुरका कुरा धेरै भए बेसुर छ ताल देशको
दानब नै देब देखे कि! कि मै छु मठ्ठु सरि
मुहारमा रुन्चे मुस्कान टांसेर
बिदाइका लागि तिमीले हल्लाएका हातहरु ले
मेरो मुटु वा भनौ मेरो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई नै हल्लाइ दियो
तिम्रा आँखाबाट बहेको बलिन्द्र आँसुले झन
आसंका जन्माइ दियो
धराप, पाइपबम, अपहरण जस्ता
चाहिँदा नचाहिँदा दुर्घटना सम्झाइ दियो
मं त आज कुरुक्षेत्रमा
उनको लावन्डेताले फुलको सुन्दरता लाई पनी जितेको थियो!
चन्चल सुकुमार हाशोले फुलको शुवास लाई पनी जितेको थियो!!
फुल राम्रो की उनि,छुट्याउनै मुस्किल गुरासै गालामा फुली दिदा!
सिर-बन्दिमा छोपेको सिउदो बादल जस्तो केश खुलेको थियो!!
ठुला ति दुई नयँन खोल्दा नबोलेरै,लजाएरै सबै भनेको थियो!
नौ गेडी गलाको,हातको चुरिले झनै सुन्दरतालाई घुलाको थियो!!
पैजनी छम छम बज्दा उनी संग संगै रनबनै झुमी नाच्छरे!
उर्लने खहरे पनी उसलाई भेट्दा नदिसरी सान्त बहेको थियो!!
स्वर्गकी अप्सरा लाई जित्ने पहाड कि रानी चारै दिशा कहलेको थियो!
उनको लाबन्डेताले फुलको सुन्दरता लाई पनी जितेको थियो!!
आदमखोर बाघहरु सुतेका छन् रे , वस्ती वस्ती बाट मान्छे हराएकै छन्
नरमेध यज्ञका पाखण्डी पण्डाहरु, रक्त पिपाशु उन्मादमा रमाएकै छन्
माओ, लेनिन वर्तमान का लागि उपहास , समय को अनौठो व्यंग बने
सढी सकेको दुर्गन्धित माओको लाश बोकेरै कत्ति ले कमाय कत्ति ले
वरिष्ठ देखि कनिष्ठ पुङ् माङ हरु,अझै मलामी हिंड्न छोडेका छैनन
भ्रुण हत्या गर्न नसकेकी लाचार आमा,तिमी जन्मिंदा खुशी हुने बाबु
आफ्नो कोख लाई धिक्कारेर आसुँ वगाइ रहेकी होलिन
धिक्कार् छ यस्ता अशुरी कपुत जन्माउने आमाहरु लाई
एउटा फुल फुटी दिएको भए पो के नै बिग्रिन्थ्यो र्
केही फरक पर्दैनथ्यो
हिजो संगै भिजेको झरिको दिन याँद आयो!
भिर पाखा हिंडेको पशिना को स्वाँद आयो!!
चौतारानी उस्तै ह्रैछ बर पिपल नि उस्तै!
स्‍मृति मा छरिएर झझल्कोको नाद आयो!!
एक जोडी ढुकुर फेरी भुरुरु उडी कहाँ गयो!
रित्तो डाली गोघुली साँझ फेरी तिम्रो याँद आयो!!
चारा फर्के जस्तै माया पनी फर्की आईदिय!
पाती टिपी देउराली लाई चडाएको याद आयो!!
यतिबेला नेपाल बाबुराममय भएको छ । यसो त देशमा बाबुरामहरू कति छन् कति, तर चर्चाका डाक्टर बाबुराम नम्बरी सुनको पनि १ नम्बरी मानिएका छन् , उनी माओवादी पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन् र यो त्यही पार्टी हो जसले मुलुकलाई १३ वर्ष रगतपच्छे पार्दै त्यही लिस्नो चढेर सत्ताको मचान चढ्न आइपुगेको हो , तर बाबुराम माओवादी भन्दा बाहिर राखिएर बुझिए जस्ता देखिने पात्र बनेका छन् । उनी माओवादी हिंसा र समस्याभन्दा बाहिर राखेर महिमामण्डन गरिएका देखिन्छन् । उनले बन्दूक बोकेर कसैको सफाया गरे-गरेनन् तर त्यसको नेतृत्व तहमा रहँदा लाग्ने कल्मषको दोषबाट पनि उनी बाहिर देखिएका छन् अथवा देखाइएको छ । विशेष गरी , माओवादीलाई शान्ति र संविधानसभाको बाटोमा ल्याउने योजनाकार मानिएका बाबुराम , माओवादीले शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि लिएको बाटोमा सहमतीय राजनीतिको पक्षमा उभिने सीमित नेताहरू मध्ये पर्छन् भनिन्छ।
सहमति, शान्ति र संविधान भन्दै माओवादी पार्टीभित्र बसेर एक्लै कराइरहने बाबुराम , बहुमतको पनि अनौठो
आदौ देवकी देवी गर्भजननम् गोपीगृहे वर्धनम्
माया पूतन जीविताप हरणम् गोवर्धनोद्धारणम् ।
कंसच्छेदन कौरवादी हननम् कुंतीसुत पालनम्
एतद् भागवतम् पुराण कथितम् श्रीकृष्णलीलामृतम् ।।
भगवान विष्णुका दश अवतार मध्ये श्रीराम एवं श्रीकृष्ण दुबै विशेष मानिन्छन् । परन्तु दुबैका प्रकृति र आचरणमा प्रशस्त भिन्नता छन् । श्रीरामले कठिन भन्दा कठिन परिस्थिति मा पनि मर्यादाको अतिक्रमण गर्नु भएन र त्यसैले वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर चिनिनु भयो । जबकि, श्रीकृष्णको अवतरण विपरीत परिस्थितिमा भएको थियो । माता देवकी र पिता वासुदेव अत्याचारी कंसको कारागार भित्र बन्दी हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो अविर्भाव पछि स्वधाम फिर्ति सवारी नहुञ्जेल श्रीकृष्णले यति धरै विविधताका साथ अनकौँ लीलाहरू सम्पन्न गर्नुभयो जसले गर्दा वहाँ लीला-पुरुषोत्तमका रूपमा चिनिनुभयो ।
पौराणिक ग्रंथका कथाहरूमा भगवान श्रीकृष्णका लीला-विलास अनन्त छन् । जन्म लिँदा नै वहाँ चतुर्भुज-रूपमा प्रकट भएर फेरि सानो बालक बन्नु भयो भने , वहाँको उद्धारका लागि कारागार का पहरेदार सबै निद्रित बने , पिता वसुदेवजीको हथकडी-बेडी एवं ढोकाहरू स्वयं खोलिए , यमुनामा बाढी आए पनि रातारात बालक श्रीकृष्ण गोकुल पुर्‍याइन समर्थ हुनुभयो । यस्ता चमत्कारपूर्ण असामान्य कार्यहरू वहाँको जन्मपूर्व वा जन्मसंगै भएका पाइन्छन् ।
आज: देश बनाउन मै चाहिन्छ। म बिनाको सरकारले देश बनाउदैन। देशका समस्या म प्रधान मन्त्री हुने बितिक्कै समाधान हुन्छन जो अरुबाट हुन सक्दैन।
छ महिना पछी: छ महिनाको ऐतिहांसिक उपलब्धी पछी सहमती र बाधा फुकाउनको लागी मैले राजिनामा दिए। बिभिन्न बाधा अड्डन बिच छ महिनामा मैले जती गरें कसैले गरेका पनि छैनन,गर्ने पनि छैनन। आगामी दिन जनताको लागी सुखमय रहोस।
एक बर्ष पछी: म देशको कतिऔं प्रधान मन्त्री रे?
दश बर्ष पछी: ए म पनि प्रधान मन्त्री भएको हो र?
धेरै बर्ष पछी: आज भूपू प्रधान मन्त्रीको निधन भयो। त्यसैले सरकारी कार्यलय र बिध्धालय देशभरी बन्द रहने छन।
उपलब्धी: तपाई आफै निर्कौल निकाल्नुहोला।
स्वार्थको चरु होमेका हरुले स्वार्थ साधेको देखियो!
संसार फेर्छु भनेर हिंड्ने आँफै फेरियको देखियो!१!
पशिनाका कुरा गर्थे हरु,जिबन का कुरा गर्थे !
जिबन का कुरा गरी जगत लाई लुटेको देखियो!२!
आज के भयो ती सपुतले देखेका सपनाहरु!
नेताहरुको बक्र दृष्‍टि सत्ता माथिको देखियो!३!
संसार के फेर्थेर स्वार्थिले भुँडी भरेको देखियो!
जनता को नाममा जनत भजाएको देखियो!४!
जाग ए जागी हरु नयाँ भस्मा शुर देखी जाग
भस्मा शुरले संम्बिधान सभा नचाएको देखियो
यसकारण यहाँ चुप बसिएको छ
आवाजहरूले मुख भरिएको छ !
पखाला लागेको हो यो समयलाई नै,
कमजोरीले यो आँखा भासिएको छ ।
जतासुकै झुकाउन सकिन्थ्यो होला शिर,
गाह्रो यही छ शिर आधा ताछिएको छ ।
तलामा जो सबैभन्दा बस्छ माथि,
उसकै कारण यो घर थलिएको छ ।
भो नबताऊ को-कति छ इमान्दार,
थाहै छ कसले कति सम्झिएको छ ।
Posted by: Jotare Dhaiba Labels: गीत/ गजल/ कविता
As East Africa is seeing the biggest draught in the history Bob Marley's song of 1973 "High Tide or Low Tide" has emerged with new video to help the present crisis of Africa. The recently released video documents the East Africa Crisis that is affecting more than9million people dying of starvation. In the video, mothers with their fragile kids are seen. "A child is born in this world, he needs protection," Marley sings in the vide. He adds "In high seas or-a low seas, I'm gonna be your friend.".
For the East African crisis, Bob Marley family has writtenaletter asking the public to support the effort.
Please help to Save The Children. .
"हाम्रो बुटोल (बुटवल) भन्दा त यताको (काठमाडौंको) हावापानी ठण्डा नि बाबु !" - बर्मेली लवजमा बोल्ने केशवकी आमाले 'नि' मा जोड दिएर बोलिन् र हातमा रहेको पिउरी कात्न व्यस्त भइन् ।
त्यसैबेला केही परको गणेशथान मन्दिरमा घन्टी बजेको सुनियो "टंग ! टंग !! टंग !!!" उनीहरू काठमाडौं गणेशथान नजिकै साइँला मामाको घरमा २-४ दिनको लागि पाहुना हुनआएका थिए , खासगरी केशबकी आमा पशुपतिमा बत्ती बाल्न आएकी थिइन् ।
मन्दिरबाट आइरहेको आवाजतिर ध्यान दिँदै केशब बोल्यो, "हजुर ! चिसै हो चैततिर पनि यत्तिको ठण्डा ! उतातिर (बुटवलमा) यतिबेला त छतमा बस्न कहाँ सक्नु !" यति भन्दै ऊ छतको डिलमा उभियो अनि आफ्नो परिबारले किनिराखेको घडेरीमा हर्लक्क बढिरहेका हरिया सागसब्जी र घडेरीको पश्चिम कुनाको छेउमा बतास सँगै फुर्र-फुर्र नाचिरहेका शिरिषका पातहरु हेरिरह्यो । उसका नजर छिमेकीको बगैंचातिर पनि दौडियो । त्यहाँ पनि भोगटे, अम्बा, शिरिषका पातहरु उस्तैगरी बताससँग जिस्केर चल्दै थिए - फुर्र-फुर्र । बताससँगै रमाइरहेका पातहरुलाई हेर्दै उस्को मन पनि उसैगरी रमाइरहेको थियो । केशवकी आमा पनि उसको छेवैमा आइन् र शिषिरको बोटतिर
हेर्दै बोलिन्, "बाबु ! ह्याँ (घडेरी देखाउँदै) घर बनाउँदा यो बुट ( शिरिषको बोट ) जोगाएस् है !" उसले समर्थनमा "हजुर" भन्यो । "आमा ! रमाइलो छैन त काठमाडौं ?" पर देखिएको रानीवनतिर मोहितनजर दौडाउँदै बोल्यो केशव ।
हरिताम्य पछ्यौरीमा सजिएकी नवदुलहीझैँ सुन्दर रानीवनलाई आमा छोरा दुबैले मन्त्रमुग्ध भई हेरिरहे । रानीवन हुँदै केही तल आफूहरू उभिएको छतदेखि केही वर विष्णुमति खोला छर्लंगै देखिएको थियो । चैते न्यानो घाममा केही आइमाई केटाकेटीहरू लुगा धुँदै थिए ।
मैले विद्यार्थी छँदा भूपीलाई भेटेको हुँ । जसरी उनका कविता चटक्क कोरीबाटी गरी मिलाएको गुच्छादार कपाल जस्तै मिलेको हुन्थ्यो, उनी आफू पनि लवाइ र बोलीचालीमा त्यस्तै सफा र सरल थिए । मान्छेहरूले उनलाई कम्युनिस्ट भने । हुन त प्रारम्भिक कालमा मार्क्सवादी प्रभावबाट प्रेरित भएर उनले सर्वहाराको लागि लेख्‍नुपर्छ भन्ने सोची आफ्नो नाममा सर्वहारा उपनाम नै गाँसेर पनि कविता लेखे । वादको रूपमा कुनैलाई एक अँगालेर लेख्‍नु व्यक्तिको स्वेच्छा र कुनै समयविशेषमा प्रभावकारिताको कुरा पनि हुन्छ । तर भूपी आफूलाई न त कम्युनिस्ट न त कांग्रेस नै भन्न रुचाउँथे । नेपालमा कांग्रेस होइन 'काम गरेस्' र कम्युनिस्ट होइन, 'कर्तव्यनिष्ठ' भावनाको मान्छे चाहिन्छ, अनि मात्र मुलुक बन्छ भन्ने सोच राख्थे उनी । नेपाल बन्नुपर्छ, गरिबी हट्नुपर्छ भन्नेमा चिन्तनमग्न रहन्थे ।
पञ्चायत कालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्य भएका भूपीलाई धेरैजनाले त्यतिबेला शङ्कालु नजरले हेरे । तर उनी पञ्च र पञ्चायत व्यवस्था दुवै मान्दैनथे । राजालाई भने बडो आदरभाव राख्दथे । आफूले त्यस्तो मान्ने राजाकै आग्रह टार्न नसकेर आफ्नो स्वतन्त्र कविको छविमाथि प्रश्नचिह्‌न उठ्ने खतरा मोलेरै पनि उनी एकेडेमीको सदस्य भएको हुनुपर्छ । उसै पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शालीन र सरल व्यवहारका कारण त्यतिबेला र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि धेरैले आसपासमा रहेर काम गरे । तर अपजस एक्लो भूपीमाथि खनियो । जीवनको अन्त्यतिर उनी
Posted by: Jotare Dhaiba Labels: व्यक्ति-अभिव्यक्ति
सबेरै उठ्नासाथै 'हाइ, गुडमर्निङ !' को थेगो अनि बेलुका सुत्‍ने बेलामा 'राम्रो सपना देख्‍नू है, गुड नाइट !' भन्ने नियमित लय । फोन शिरोमणिहरूको परिचय नै यस्तो हुन्छ, मानौं यी मनुवा २४ घन्टे प्रसारणको अभिभारा बोकेका सञ्चारमाध्यम हुन् । काशीका पण्डाबाबाका हातमा ट्यास्स निधार-निधारमा टाँस्ने टीकाको लेप हरपल भइरहेजस्तै फोन शिरोमणिको हातमा फोन नामको भाँडो हुने गर्छ । अरु त अरु, फोनमय सपना देख्‍नु फोन शिरोमणिहरूको रात्रिकालीन ‘पार्टटाइम उद्यम’ हो ।
टेलिफोन अपरेटर, पीए अनि रिसेप्सनिष्टको धपेडीपूर्ण फोन-यात्रालाई फोन शिरोमणिको अद्‌भूत हर्कतले काँचै खाइदिन्छ । फोनैफोनको अन्तरंग संगतमा रहेर अभ्यस्त हुन थालेपछि फोन शिरोमणिको उपाधि आफसेआफ सुरक्षित भइहाल्छ । यो उपाधि र ताजको लागि कुनै भनसुनको तात्तातो मनसुनमा गोप्य जुहारी घस्नुपर्दैन । हेर्ने हो भने यो उपाधि स्वतःस्फूर्त सामाजिक सम्मानको रुपमा विकसित हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
कामविशेषले एउटा अफिसमा पुगेको थिएँ । रिसेप्सनमा बसेकी युवती फोनमा व्यस्त थिइन् । आफ्नो काम गुटमुट्याउने पिरलोले रन्थनिएको म तिनको रातोपिरो व्यस्तता देख्दा बिचरी कसरी पो भ्याओस् काम भनेर आफ्नो व्यग्रतालाई एकातिर खुम्च्याएर पर्खिनलाई राजी भएको थिएँ । तर तिनको मुखबाट त व्यस्तताको अर्कै स्वादिलो रन्को पो फुत्किन थाल्यो ।
सपना बोकेर आउनेछु
तारा बनी आउनेछु
सितको थोपा बनि आउनेछु
सुन्दर् बिहानिमा चिरर्बिर गरी आउनेछु
तिमी पर्खी राख है
म तिम्रो बाटो बनी आउनेछु
दुर गगनमा सुनको बिहान छरे
तिम्रो आगनिमा झलमल बनाउन आउनेछु
टाढा क्षितिजमा हेरेर न टोलाउ
म सिम्रिकी रङ बोकेर आउनेछु
बाचा कसम तोडेपछि नसोध मलाई
म त त्यहीँ छु जस्ताको त्यस्तै छु
अर्को जिन्दगी ओडेपछि नसोध मलाई
मनको बिरुवा उखेलेर बास्ना सबैलगी
अन्तै रोपी गोडेपछि नसोध मलाई
हाल के बताउँ के भो भन्छन् सबैले
मुटुमा घाउ जोडेपछि नसोध मलाई
पालैपालो फुकेका भविष्यका बेलुनहरु
नसजाई कनै फोडेपछि नसोध मलाई .
अपडेट: गाउँखाने कथा ४८ को सहीउत्तर हो: ढोका
दिनभरी ताकाताक, रातभरी खापाखाप , के हो?
मैले आकाश खसाउँनुछ, र त गजल लेख्छु ।
आँधी, बतास बसाउँनुछ, र त गजल लेख्छु ।
घाम जुन रातदिन, किन लुकामारी खैल्छन् ?
दुवै जालमा फसाउँनुछ, र त गजल लेख्छु ।
आजकाल देख्छु यहा, मानवियता टुक्रदैछ,
उस्मा संवेग पसाउँनुछ र त गजल लेख्छु ।
अरु हैन आफैबाट, सकिदैछ मान्छे यहाँ,
विकृतीहरु भसाउँनुछ, र त गजल लेख्छु ।
आ आफ्नै चोटब्यथा, दुःखी रा’छ सबै मान्छे,
हरेकलाई हसाउँनुछ, र त गजल लेख्छु ।
केही दिनअघि तर धेरै दिनपछि शाम्भवीको फोन आयो ।
" शार्दूल म बेलाबेलामा अतीतका ती फाँटमा त्यसैत्यसै डुल्न पुग्छु । हामीले टेकेका ती डोब टेक्दै हिड्छु अनि त्यहाँ त्यही तिमीलाई देख्छु । त्यही भएर आज पनि फोन गरेकी अर्थात तिमीलाई सम्झेर ।"
मैले भने- "शाम्भवी तिमी र ममा यही फरक अझै बाँकी छ । तिमी बेलाबेलामा सम्झन्छौ तर म कहिल्यै विस्रन्न । कहिल्यै नविसे्रपछि सायद सम्झीहरनु नै पर्दैन !" केहीबेर हाँसोमा परिणत भएर हाम्रो सम्वाद सकिन्छ ।
शाम्भवीसँग मेरो एकप्रकारको सम्मानित सहवास थियो । आत्मियता र मित्रताको आवादीमा फैलिएको हाम्रो सहवासमा स्नेहका नाता साइना र सम्बन्धहरु थिए तर उसँग मेरो केही छैन । न कुनै नाता-सम्वन्ध न आत्मियता न मित्रता ! यी केही नहुँदा पनि मेरो मानसपटलमा बसेको शाम्भवीको सम्झनालाई उसले प्रतिस्थापित गर्दैछे । शिलामा खोपिएकाअक्षर जस्तै मेरो स्मरणमा खोपिएर बसेकी छे त्यो केटी ! शाम्भवीलाई कहिल्यै नबिसे्र जस्तो अब उसलाई म कहिल्यै नबिस्रने भएको छु
त्यो केटी ! कति खुशी छे आफैंमा ! नितान्त नौलो त्यो आयतीत पनमा ! सापटी लिएको सँस्कारमा ! तिर्नु नपर्ने गरि ग्रहण गरेको त्यो उधारो सभ्यतामा ! यी सबैलाई उसेले जीवनशैली बनाएकी छे । ठीकै पनि छ । जीवन अरुका लागि साँच्ने भए पनि आफू खुशी बाँच्ने हो ।
म कसैको जन्मदिनको एउटा सानो जमघटमा छु । अमेरिकामा "वर्थ डे" मनाइए पनि नेपाली सँस्कार र परिकार प्रसस्त छन् । भित्र अर्को कोठामा उ बोल्दै छे । केटाहरुको झुण्ड छ उ उभिएकी छे । मेरा आँखालाई उसले आफूतिर बारम्बार तानीरहेकी छे । मेरा जस्तै हरेक आँखाहरु उसमा ठोक्किएर एकछिन् रोकिएका छन् । अनि मेरा जस्तै हरेक निख्खर आँखा उसलाई निहाल्न वाध्य छन् तर त्यो केटीको आभारुप सामू मेरा आँखा धेरैबेर टिक्न सकेनन् ।
उसको आदिमरुपको आधाँभन्दा बढीभाग आकाश जस्तै खुल्ला छ । कताकति आकाशमा देखिएका वादलका पाटा जस्तै पहिरनका पाटाले लपेटिएको छ त्यो आदिम शरीर । उसले पहिरेको पोशाकले के छोप्न खोजेको हो ? के देखाउन खोजेको हो ? ठम्याउन सकेनन् मेरा आँखाले । नसकेपछि आँखा चिम्लनु भन्दा बरु मन्टु बर्टानु ठीक ठाने । मैले मुन्टो बटारे । कान खुल्लै थिए आवाज सुनिरहेको थिएँ ।
मानिसको भीड बाक्लिदै छ । उ बोलिरहेकी छे उसको बोलीले सबैको ध्यान तानेको छ । बोलीसँगै उसको पहिरनले सबैका आँखा झन् मजाले तानेको छ । मानौ उसको शरीरमा पृथ्वीको भन्दा भारी गुरुत्वाकर्षण छ ।
ठिटाहरुको हुल एक्कासी बाहिरिन्छ । भान्साको टेबुलमा म रसपान सहित खानपान गर्दैछु । त्यो हुलमा प्रायः परिचित अनुहार छन् तर त्यो एउटा अनुहार एकदमै अपरिचित । सबैले अंकल भनेर अभिवादन गरे तर उसले "हाई बडी" भन्दै मसँग हात मिलाई । म एकछिन् अलमल्ल भएँ । अनि हग गर्न तम्सी । संकोच भयो ।
मैले नमस्ते भने मुखले तर मनमनै यसलाई सभ्यता र सँस्कार सिकाउँकी भन्ने लागेको थियो । कागको तीखो चोसोले पाकेको मेवा ठुँगे जस्तो ठुँगियो मेरो मन ।
" ओ नमस्ते ! हाईू" भनि उसले फेरि ।
हुलको एक ठिटोले भन्यो "उ प्रकाश अंकल हो ।"
उसले फेरि निसङ्कोच भनि "हाई, प्रकाश Û कस्तो छ तिमीलाई ?" यो पटक अशिष्ठताको अर्को थप्पड हाने जस्तो भयो मलाई ।
उ अँग्रेजीमा बोलिरहेकी छे म केही बोलिन । मेरो असहजताको महशूस अर्को ठीटोले गर् यो जस्तो लाग्यो । स्पष्टिकरण दिदै भन्यो– "अंकल, उ नेपाली बुझ्छे तर इङ्गलिस मात्र बोल्छे ।" नसोधेको, नखोजेको र नसोचेको जवाफ दियो त्यो ठिटाले । बन्द ओठभित्र मेरा दाँत एक्कासी लड्न थाले आपसमा । टाउको भित्र बारुलो झै भन्भनिएको रिस दाँतले दाँतसँग पोख्न थाले ।
फेरि पनि म केही बोलिन । फिस्स दाँत देखाएर सहमतिको मुन्टो हल्लाएँ तर भित्रभित्रै मनमा उप्रतिको आक्रोशको भेल उर्लिरहेको छ । मान्छेको मन कहिलेकाहीँ अनुहारमा अनुदित भए जस्तै मेरो मन पनि सायद अनुदित भयो होला उसले निधार खुम्च्याउँदै कुम कक्क्र्याउँदै मधुर बोलीमा निर्लज्ज बोली "ओ माई डियर, ह्याण्डसम ! तिमी ठीक त छौ ?" एकै स्वरमा भनि "तिमी साच्चै ह्याण्डसम देखिन्छौ ।"
“ हजूर ठीकै छु ।”
" तर प्रकाश, तिमी सहज अनुभव गरिरहेका छैनौ । मलाई त्यस्तै लागिरहेछ ।" बोलीमा थोरै आवरणले ढाकी आफ्नो पहिरन जस्तै ।
" हैन केही छैन त्यस्तो ।" उ अँग्रेजीमा बोलिरहेकी छे । म नेपालीमा जवाफ दिइरहेको छु । मभित्र यति बेलासम्ममा धेरै खुल्दुली, उत्सुकता र आक्रोसको युद्ध एकसाथ चलिसकेको छ । मेरो सहजताभित्र असहजातको कालो बादल छाइसकेको छ । मेरो मनको शान्त तलाउको तहमा आवेगको दह मिसिन थालेको छ । धैर्यताको बाँध फुट्न लागे जस्तो भइरहेछ । टिलपिल टिलपिल ! उकुसमुकुस !
" ओ के प्रकाश, म फर्किहाँले" अँग्रेजीमै बोल्दै अर्को कोठातिर लागि । मलाइ अलिकति राहत अनुभूत भयो । लामो सास फेरेँ । कोठा भित्रबाट बाहिर उसको आवाज पहिले जस्तै चर्को र टड्कारो आइरहेछ । गानोमा मौरी झुम्मिए जस्तो गरि ठिटाहरु सबै त्यही झुम्मिएर बसेका छन् ।
मभित्र उत्सुकताको सगरमाथा ठडिन्छ । आफूलाई बुढा पहाडहरु जस्तै स्थिर , धैर्य, सहज र शान्त बनाउँदै म सोच्न थाले- "यो केटी हो को ? यो केटी पक्कै नेपाली होइन । किन भने नेपाली बोल्दिन । होइन, नेपाली नभए नेपाली कसरी बुझ्छे त ? होइन, यो केटी नेपाली नै हो । कता कता लाग्छ यो क्यारेवियन वा ब्राजिलियन पनि हुन सक्छे ! हैन, बंगाली जस्ती पनि छे ! कालीकाली हिस्सी परेकी निक्कै राम्री । भारतको पश्चिम बंगालमा नेपाली भाषीको सरसंगतमा रहेका धेरै बंगालीहरु नेपाली बुझ्छन् तर बोल्न सक्दैनन् । यस्तै पनि त हुन सक्छ । आखिर उसले बोल्ने भाषासँग मेरो के सरोकार ? उसको पहिरनसँग मेरो के दरकार ? उसको चालचलन र हाउभाउप्रति मेरो के अधिकार ? व्यर्थै उसका बारेमा म टेन्सन लिइरहेको छु । म आफूलाई सकारात्क र सहज बनाउने प्रयत्न गर्छु ।
केही क्षण अघि अर्कोतिर बटारिएको मुन्टो अहिले फेरि उतिर फर्किन थालेको छ । रिसाएका आँखा लालयित हुन थालेका छन् । बारम्बार उसलाई हेरिरकेका छन् । मेरा लागि उसको गुरुत्वबल झन बढेको छ ।
" तिमी ह्याण्डसम देखिन्छौ । ओ माई डियर ह्याण्डसम !" अनि "तर प्रकाश तिमी सहज अनुभव गरिरहेका छैनौ ।" अमेरिकामा केटीमान्छेले केटामान्छेलाई यस्तो भन्नु भनेको प्रेमको सांकेतिक प्रस्ताव हो भन्ने सुनेको थिएँ । उसले केहीबेर अघि भनेका
यी शब्द दोहोरिदै तेहेरिदै मेरा कानमा लगातार ठोक्किदै मनमा गुन्जिन थालेको छन् । उसको स्वरुपले आँखाको बाटो भएर हृदयमा डेरा जमाउन थालिसकेको छ । नजानिदो चालाले मभित्र चाहनाहरु चुलिदैछन् । उच्छवासका लघु आभाष मिश्रित उत्सुकताहरु मनमा वयल खेल्दैछन् । त्यो केटी मेरो छेउमा आएर बसिदिए हुन्थ्यो । मसँग कुरा गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ । उमेरमा मभन्दा उ निक्कै कान्छी छे तर पनि यसले यस्तो कुरा यत्रो मान्छे सामु मालाई नै किन भनि ? प्रश्नको भीडभित्र मेरो मन हराउन थाल्छ ।
निक्कैबेर भयो म सोचिरहेको छु । उ मेरा सामु आएकी छैन । कि अब त्यो आउँदिन ? आइमाई मान्छे भनेको बगेको खोलो जस्तै हो । त्यसमा पनि अमेरिका ! केटी, काम र मौसमको भरोसा नभएको ठाउँ । कि त्यसले पनि मलाई कतै गवाँर र पाखे त सोचिन । निक्कै अघि बोस्टनको एउटा रेष्टुरेन्टमा काम गर्दाको सम्झनाले मष्तिष्कको पाना एकाएक पल्टायो । एक साना नेपाली भाइबाट गवाँर र पाखेको विशेषणले आभूशित हुनु पर्दाको दुःखानुभूतिले एकछिन अल्मल्यायो । भरखर अमेरिका छिरेर रेष्टुरेण्टमा काम गर्न थालेको मान्छे म । एक अमेरिकी ग्राहकले बोलेको कुरा राम्रोसँग नबुझ्दा र फर्काउन नसक्दा उनले मलाई त्यो विशेषणको दोसल्ला निसङ्कोच ओढाउँदै भनेका थिए "अँग्रेजी नबुझ्ने यस्ता गवाँर-पाखे किन अमेरिका आउनु ?" मैले नसुने जस्तो गरेँ बोल्नै परेन । अर्की एक नेपाली चेली थिइन काठमाण्डुकी नेवारकी छोरी । मान्छेले मान्छेलाई मान, सम्मान, आपमान जे गर्दा पनि कोही खुशी र कोही दुःखी त हुन्छन नै । मलाइ त्यो अपमानपूर्ण सम्मान दिँदा उनले नमीठो अनुहार लाएको देखिरहेको थिएँ, फिसिकक फोस्रो हाँसो हाँसेर पचाएँ । मनमनै भने- "धन्यवाद भाइ । तिमीले मेरो कमजोरीको किलकिले समायौ ।" प्रतिवाद गर्नु भन्दा नसुने जस्तो गर्न नै ठीक ठाने । अरु केही नेपालीहरु पनि थिए सबैले दाइ भनेर सम्मान गर्थे नजानेको सिकाउथे । दरवारिया खान्दानको हूँ भन्ने ती फुच्चे त्यहाँ काम गर्ने हामी नेपालीमा सबैभन्दा कान्छा र होचा थिए तर अरुलाई होच्याउनेमा सबैभन्दा अग्ला तिनै थिए । सबैले राजाराजा भन्थे आफूलाई राजै ठान्थे । मनले नभने पनि मूखले बेलाबेलामा म पनि भनिदिन्थे । कानाको देशको आँखा चिम्लनु लंगडाको देशमा खुट्टो खोच्याउनु भन्ने सम्झेर चुपचाप बस्थे ।
कतै यसले पनि मलाई यस्तै पो सोचि की ? मनको बाघले खान थाल्यो । उ हरेक शब्द अँग्रेजीमा बोलिरहेकी थिइ म हरेक शब्द नेपालीमा भनिरहेको थिएँ तर उसले जे सोधी त्यसको जवाफ त दिएकै छु नि । नबुझेको त हैन नि । हैन, यसले यस्तो सोचिन ! हैन, नसोचेको भए म छिट्टै आइहाले भनेर पल्लो कोठामा गएकी केटी उतै रमाएर किन बसी ? मनमा फेरि तर्क-वितर्कहरुको दोहोरिलत्ता चल्न थाल्यो । म बेलाबेलामा उतिर हेर्छु तर उ उतै रमाइरहेकी छे । मलाइ भने छटपटीले हुट्हुटी पार्न थालिसकेको छ । उ आइन भने के गर्ने ?
सोचेँ- "म पनि मुर्खको भाँडो नै हुँ ।" उसले मेरो त्यत्रो प्रशंसा गर्दा मैले त्यही अनुरुपको शाब्दिक वा प्रतिकात्म अभिव्यक्क्ति व्यक्त गर्न सकिन । सायद त्यसैले उ मबाट एकैछिनमा अलग्गिएकी होली ! एक छिनमा नजिक भइ, एकै छिन्मा टढा । यहीँका अमेरिकनहरु जस्तै ! हुन त मान्छेको मन र शिशा उस्तै हो भन्छन् सानो कुराले टुट्ने । के मैले यसालाई टुटाएँ त ? आखिर मलाई राम्रो नभन भन्ने मान्छे को छ यो संसारमा ? मलाई राम्रो भन, तिम्रो मनले खराब ठाने पनि । म मान्छे हुँ भन्ने कुरा मैले किन विर्सेको ? मैले पनि क्षणिक भावुकता मिसिएको भए पनि उसले जस्तै प्रणयमिश्रित प्रेममय बोली बोलिदिएको भए के विग्रन्थ्यो ? मेरै प्रश्नको पहिरोमा म एकछिन पुरिन्छु । उसको कोमल हृदयलाई मेरो कठोर व्यवहार र रुष्ठ अनुहारले सायद चुडियो कि क्या हो ? मलाई फेरि मनको बाघले खेद्न थाल्छ । केही क्षण अघिसम्म आगो भएको मान्छे अहिले म पानी भएको छु । उ मेरो मनको तहमा तैरन थालेकी छे । भित्रभित्रै मभित्र केही हराए जस्तो भइरहेछ । मनले केही खोजे जस्तो भइरहेछ ।
केही बेर फेरि सोचेँ- "हैन अमेरिकामा केटीमान्छेले केटामान्छेलाई यस्तो कुरा भन्नु सामान्य नै होला । भालुको मन खनिउ माथि जस्तो भएको होला मेरो मन !"
अर्को उपाय सोचेँ- "ल म जानु पर्यो" भनेर अली ठूलो स्वार बोले । मुखले बोलेँ मात्र तर मनले हिड्न चाहेको थिइँन । मात्र उसलाई म सुनाउन चाहन्थे र उसको प्रतिकृया बुझ्न चाहन्थे । सुन्ने बित्तिकै उ दौडेर आई । मेरो पाखुरा सामाउँदै कुर्सीमा बसाई र भनी- "एकछिन् बस न !" के खोज्जस् काना आँखा जस्तो भयो मलाई । मन फुरंग, मस्तिष्क हलुंगो भयो ।
" मैले तिमीसँग कुरा गरिसकेकै छैन कहाँ जान लागेको अहिल्यै" म मुस्कुक हाँसे मात्र ।
" ए तिम्रो नाउँ के रे" उसले फेरि मेरो नाउँ सोधी मैले बताएँ । उ अहिले पनि अँग्रेजीमै बोलिरहेकी छे । म मेरो मातृभाषा नेपालीमै बोलिरहेको छु ।
" तिमी के काम गर्छौ ?"
" म सानोतिनो स्टोरमा काम गर्छु ।" मेरो जवाफ सुनेर निधार खुम्च्याउँदै हात फिजाउँदै घाँटी कक्र्याएर उसले भनि- "किन सारा नेपाली स्टोर, ग्यास स्टेशन र ईण्डियन रेष्टुरेन्टमा मात्र काम गर्ने? उसको बोली र हाउभावमा हेय भावको अमिलो गन्ध मिसिएको भान भयो मलाई । मैले स्पष्टिकरण दिइन । फेरि पनि भलाद्मी हाँसो मुसुक्क हाँसे ।
उसको अँग्रेजी बोलाईको लवजले लाग्छ यो अमेरिकन होइन । यो यहाँ जन्मेकी पनि होइन । यो यहाँ धेरै सानो उमेरमा आएकी पनि होइन । मेरो मस्तिकमा यो प्रश्नको लट्टु फनफनी घुमीरहेको छ । प्रश्नै प्रश्नको लामो सूचि तयार भै सकेको छ । उ मेरो एकदमै नजिक बसेकी छे । मान्छेको उपस्थिति पातलिदै छ । मभित्र कताकता असहजताको अनुभूति पनि भइरहेको छ । अचेतनाको आवरणभित्र लुकेको उसको बेलेबेलाको शसक्त सचेत स्पर्शले मेरो शरीर संक्रमित गरिसेको छ । आगो सामुन्नेको मैन जस्तै लोग्ने मान्छेको मन ।
उ अब अमेरिकाका बारेमा , नेपालीको अवस्थाका बारेमा महाभारत सुनाउन थाली । धेरै कुराहरु बताई अमेरिका बारेमा । मानौ म अमेरिका भरखर आएको छु । मैले केही जाने, बुझे र देखेको छैन । म सर्तकतासाथ मेरो भलाद्मी पनलाई बचाउँदै होमा हो र ए, ए भन्दै टाउको मात्र हल्लाई रहेको छु । बेलाबेलामा मुसुक्क हाँस्दै त्यो महाभारतको कर्कश ध्वनी एककोहोरो सुनाउन वाध्य बनाउछु मेरा निरिह कानलाई । उसले नेपाल र नेपालीका बारेमा धेरै कुरा गरि तर ती धेरैमा धेरै नराम्रा मात्र गरि । यहाँबाट अब म फेरि उल्टो हुन थालेँ । पहिले सुरुमा उसले हात मिलाउँदाको अवस्थामा म विस्तारै फर्किन थाले । भित्रभित्रै विपरित दिशा तिर बग्न थाले । हावाहुण्डरी जस्तो कहिले पूर्वबाट । कहिले पश्चिमाबाट । छिन्छिनमा दिशा परिर्वनतन गर्दै छ मेरो मनले ।
अहिले ती ठिटाहरुको झुण्डलाई उसले त्यसरी नै छोडिदिइ जसरी केहीबेर अघि मलाइ छोडेकी थिई । फल रित्तिएको रूखलाई चराहरूले छोडे जस्तै । मन भाँडिने र बाँडिने क्रम जारी छ । फेरि बाँडियो । एक मनले अब यो केटीको फन्दाबाट उम्किनु नै वेश हुन्छ भन्ने ठाने । अर्को मनले हैन यसको बारेमा मैले जान्नै पर्छ भने । सोधेँ- “हामीबीच धेरै कुरा भयो तर तपाइँको नाउँ थाह भएन ।”
“ कसरी थाह हुन्छ त ? तिमीले अहिलेसम्म सोधेका छैनौ ।” उसको बाचाल जवाफले मलाई एकछिन् नाजवाफ बनायो । म फेरि भलाद्मी हाँसो हाँसे मुसुक्क । उसले आफ्नु नाउँ बताई । उसको नाउँ सुनेर फेरि म एकछिन अल्मलिएँ । यस्को नाउँ न हामी नेपालीसँग न भारतीयहरुसँग मिल्ने खालको छ ! म एकछिन् घोसेमुन्टो लाएर एककोहोरिएँ । म निक्कै होसियारी र सतर्कतासाथ उसालाई पढ्ने प्रयत्न अझै गर्दैछु । म फेरि पुरानै कुरामा फर्नक चाहेँ र सोधेँ- “स्यान्ड्रिया तपाइँको मातृभूमि कुन हो अर्थात कुन देशबाट आएकी ?” मलाइ विश्वास थियो यो केटी अमेरिकामा जन्मेकी चैं हैन ।
अनुहार खुम्च्याउँदै बताइ- “नेपालबाट !” थोरै सोचेको तर धेरै नसोचेको उत्तर दिई उसले । दार्जिलिँगेहरु धेरै नखरा पार्छन भन्ने सुनेको थिएँ । उतैकी होली भन्ने थोरै अनुमान थियो ।
नेपालबाट भन्दा खुशी हुनु पर्ने तर मभित्र एउटा दुःखको पहाड उचालिएर ज्वालामुखी फुट्यो । आफूलाई आफैभित्र काबुमा राख्दै फेरि सोधेँ- “के काम गर्नुहुन्छ ?” आँखी भौं तन्काउँदै अनुहारमा गर्वको अनुभूति झल्काउँदै अलि उच्च स्वरमा भनि- “अमेरिकनको बच्चा हेर्छु ।” मानौ अमेरिकनको बच्चा अप्सराले मात्र हेर्छन् ।
आफूलाई अझ सामन्य बनाउँदै सोधेँ - “कति भयो अमेरिका आएको ?”
नजरका छड्के तीर मेरा निर्दोष आँखा तिर तेस्याउँदै सहज जवाफ दिइ- “सात वर्ष !” उसको त्यो सात वर्ष भन्ने जवाफ मेरो मुटुमा सात तीर भएर रोपिए जस्तो भयो ।
विनम्रता साथ फेरि सोधेँ- “अहिले तपाइँ कति वर्षकी हुनु भयो ?” “चौविस ।”
यो सबै उसले अँग्रेजीमै बताइरहेकी छे । एकछिन फेरि चुपचाप बसेँ आँखा चिम्लिएँ । भगवान सम्झिएँ ।
“ प्रकाश के भयो ?” आश्चार्यवोधक बोली बोली । “खासै केही हैन ।” मभित्रको असहजतालाई थिच्दै सहज जवाफ दिएँ । के सोचेको भन्दै मेरो हत्केला तानी । झसङ्ग जस्तो भएँ र फेरि मुसुक्क मुस्कुराउँदै भने- “केही हैन ।” मनमा फुलेको उच्छवासको फूलमा पराग बनेर बसेको उप्रतिको प्रेमरागको रस अब सुकिसेको छ । म रिठ्ठो भै सकेको छु ।
“ मलाई त म्याराथन मन पर्छ । तिमीलाई कुन खेल मन पर्छ ?” एकाएक उसले एक पागल प्रश्न गरि । आकासको कुरा पाताल पुर्याए जस्तो लाग्यो मलाई । उसले किन एकाएक यो कुरा सोधी भित्रभित्रै म आफैलाई सोध्न थाले ।
“ मेरो प्रश्नको जवाफ किन नदिएको ?” फेरि मलाई घचघच्याई । मैले भने- “बुझिन यो कुनै चाखलाग्दो र उत्तेजनात्मक खेल पनि होइन तै पनि मन पर्नुको कारण के हो ?”
त्यतिबेलासम्म त्यहाँ उ र म मात्र छौ । प्राय सबै आ-आफ्नो गन्तव्यतिर लागिसकेका छन् । पल्लो कोठामा केही मान्छे गफ गरिरहेका छन् आ-आफ्नै धुनमा ।
“ म्याराथन धावक भनेका लामा दुरीका धावक हुन् । तिनमा स्टेमिना ज्यादा हुन्छ । लोग्नेमान्छेमा स्टेमिना हुन जरुरी छ । माइ डियर, सेक्स फिलोसफी पढ त्यसबाट थाह हुन्छ । म्याराथनका खेलाडी अलि पाका र छिप्पिएका हुन्छन् थाह छ, मलाई यस्तै लोग्नेमान्छे मन पर्छ ।” यो सुनेर मैले उसलाई यसपटक तलदेखि माथिसम्म आरामले हेरेँ । म उसलाई पढ्न खोजीरहेको छु तर अब झन् अल्मलिएँ । उ मेरालागि झन क्लिष्ट, झन् गुढ र झन् रहस्य बन्दै गई । एउटा अवोधगम्य महाकाव्य जस्तो । उसँग आँखा जुधाउने प्रयत्न गरेँ सकिन । मसँग कुरा गर्दा गर्दै उसले निक्कै वाइन पनि पिइसकेकी छे ।
“ अनि तपाइँको खास नाउँ के हो बताउन मिल्छ ?” विनम्रतापूर्वक सोधेँ ।
उसको अनुहार एकाएक फूलजस्तै फक्रियो । आँखा सन्काउँदै टाउको हल्लाउँदै भनि- “मिल्छ माइ डियर ! तिमीलाई सबै कुरा बताउन मिल्छ । नेपालको मेरो नाउँ शारदादेवी हो तर मलाई यो नाउँ मन पर्दैन । त्यसैले मैले आफूलाई स्यान्ड्रिया बनाएँ । ओ प्लिज ! मलाई तपाइँ नभन । तिमी भन ।”
मभित्र भुतभुते खनिए जस्तो भयो र पनि मनमनै हाँसेँ । मनको हाँसो सायद मेरो अनुहारमा फेरि कताकता पोतियो होला ! उसले अनुमान लाउँदै भनि- “तिमीलाई मेरो कुरा मन पर्यो र त तिम्रो अनुहार हँसिलो भयो ।” म केही बोलिन ।
फेरि सोधेँ- “अनि किन अँग्रेजीमात्र बोल्नु भएको ?”
मेरो हात समाउँदै भनि- “सरी, मैले नेपाली सबै विर्सिएँ !”
यो जवाफ सुनेर म एकाएक छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ । तातो झिरले घोचे जस्तो घोच्यो मेरो मुटु उसको यो अन्तिम वाक्यले । यसले सात वर्षमा आफ्नो मातृभाषा विर्सिइ भने यसले आफ्ना मातापिता पनि विर्सिइ । दाजुभाइ, दिदीबहिनी, नातागोता, इष्टमित्र, साथीसंगत, गाउँठाउँ सबै विर्सिइ ! अर्काको देशमा शरणार्थी जस्तो बसेर आफ्नो मातृभूमिको खिल्ली उडाउने कुरा बाहेक यसले सबै विर्सिइ ! नराम्रा बाहेका राम्रा सबै विर्सिइ । महिनौ कोखमा बास दिने र धरतीमा पहिलो पाइला टेक्न साहस दिने ती माता र मातृभूमिलाई सात वर्षमा विर्सनेले मलाई त सात मिनेटमा विर्सन्छे । सायद यसले मलाइ सात मिनेटका लागि धावाक चुन्न खोजेको हो !
सृष्टि विधाको अनुपम सृजनाको स्वरुप नारी, त्याग र तपस्याकी प्रतिरुप नारी, उत्सर्गको उपमा नारी, प्रेमको आधार र स्रोत नारी ! त्यो नारीको श्रद्धा, सुधा, शक्ति, लज्जा, दया, मायाँ, छाँया, दातृ, भातृ र मातृरुपका ती सुन्दर स्वरुप सम्झेँ । अनि त्यही नारीको यो विरुपमय विभत्स रुप ! यो कल्कीरुप !
म जुरुक्क उठेँ र भने- मिस शारदादेवी उर्फ स्यान्ड्रिया तिमीले सोचे जस्तो म्याराथन धावक म नहुन सक्छु … ! वाक्य पुरा नगर्दै म हिडेँ । उसले केही भन्न अँग्रेजीमै एफ…बाट उच्चारण शुरु गरेकी थिई म हिडेको हिडै भएँ ।
अहिले त्यही स्यान्ड्रिया शाम्भवी जस्तै कहिल्यै सभ्झनु नपर्ने गरि मेरो मष्तिष्कमा सधैं नाचिरहेकी छे ।
जून १४, २०११ बोस्टन, अमेरिका ।
(यो कथाको शीर्षक परिवर्तन गरी केही पुनर्लेखन पनि गरिएको छ । यही कथा यसअघि त्यो वाचालरूप भनी यहाँ राखिएको थियो)
Posted by: Shiva Prakash Labels: कथा